Source: Barça neMadrid vanoda kubata Clasico muUnited States - Tamban RELAY
Zvinyorwa: Barça neMadrid vanoda kubata Clasico muUnited States
Barcelona uye Real Madrid vange vachishanda kwemavhiki akati wandei kuronga a Clasico inoshamara inouya zhizha muUnited States, masosi akaudza ESPN.
Masangano akati pachine basa rinofanirwa kuitwa isati yasimbisa mutambo. Makwikwi eEuropean neCopa America anoitika zhizha uno kubva munaChikunguru 12 kusvika Chikunguru 12. Makirabhu maviri aya anoyedza kutsvaga zuva rakakwana apo zvikwata zvinokwanisa kunyatsogadzirira.
KuSpain, vatambi venhabvu vari pazororo kwemwedzi saka avo vakasarudzwa kumapoka avo emunyika vanowana mazuva makumi matatu ekuzorora mushure mekutambira mumitambo yemitambo.
Nekuda kweizvozvo, sangano rinobvunza kana mashura achavepo kuti aoneke mumutambo wakasarudzika une hushamwari, kunyanya VaLionel Messi vakapotsa parwendo rwekupedzisira zhizha kuenda kuUnited States nekukuvara kwemhuru.
Barca inofarira zvikuru kuenda kuUnited States sezvo huwandu hwevatsigiri hwawedzera uye zhizha rapfuura vakapinda Miami naDetroit kutamba hushamwari huviri vachipokana naNapoli kunyangwe rwendo rwavo rwe preseason rwatanga. muJapan.
Madrid yanga ichifamba ichienda kuUnited States kwechinguva munguva yekutanga. Trips yekuUnited States yakajairika pasi peJose Mourinho uye inoenderera mberi naCarlo Ancelotti, Zinedine Zidane naJulen Lopetegui.
Barça anoziva kuti Las Vegas uye Los Angeles vanofarira kuvagamuchira uye The Washington Post yakataura kuti guta guru reNevada rakagadzirira kuvhura nhandare itsva
Zvichakadaro, iyo kirabhu ine rutsigiro rwakanyanya muCalifornia uko vaizogashira kutambira kwakanaka, saMiami neNew York avo zvakare vanoshuvira kutambira iyo Clasico.
Barça havadi kudzokorora zvakaitika zhizha rapfuura apo yakaipa pre-mwaka yakakonzera kutanga kunotyisa kumushandirapamwe wenyika.
Chikwata ichi chinoda kushandisa ruzhinji rwekugadzirira kwayo muEurope- miviri kana nhabvu mitambo - pasina kurasikirwa nemukana wekubhururuka kuenda kuUnited States uko inotarisira kusangana neMadrid pasi pezita " Clasico. «
Nyaya iyi yakatanga kutanga (muChirungu) http://espn.com/soccer/barcelona/story/4052581/barcelona-real-madrid-working-to-stage-clasico-in-us-sources
Delhi: mapurisa anoputika kana zviitiko zvinonyadzisira munzira yepasuru kuenda kune hutachiona pamasocial network - Sahiwal - xnxx